Wararkii ugu dambeeyey xaalada magaalada Tripoli ee Liibiya warbixin+Sawiro+Video – SBC
Wararkii ugu dambeeyey xaalada magaalada Tripoli ee Liibiya warbixin+Sawiro+Video
Xaalada Liibiya oo isbadashay, Wiilkii Qadafi oo soo hadley & dagaalkii oo xoogeystey
Xaalada wadanka Liibiya gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Tripoli ayaa la soo baxdey waji ka duwan kii la filayey ama la shaaciyey 24 saac ka hor waxaa soo shaacdey in wiilashii Col. Qadaafi ee la sheegay in la qabqabtey ay dhamaantood bad qabaan oo ay qaarkood ka dagaalamayaan wadooyinka magaalada ayna difaacayaan xukunka 42 sano jirsdey ee Aabahood oo la la’yahay meel uu jaan & cirib dhigay.
Dagaaladii ay soo qaadeen xoogaga mucaaradka ee ay ku soo galeen magaalada Tripoli oo la sheegay in ay ku lamaansaneyd shirqool ay maleegeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada daacada u ah Col. Qadaafi ayaa hada waxaa soo foodsaarey quwad iska caabin ah oo ka timid kumaan kun oo ciidamo ah oo jilibka u laabay sidii ay u difaaci lahaayeen xukunka liiqliiqanaya ee Col. Qadaafi.
Inkastoo xoogaga mucaaradku ay sheegteen in dagaalkii ay ku soo qaadeen magaalada caasimada ah Axadii ay ku qabsadeen badi magaalada ayaa hadana waxaa soo baxaysa iska caabin adag oo ay la kulmeen xoogaga mucaaradka waxaana la sheegay in Galbeedka magaalada ay dib uga gurteen.
Saif Al-Islam oo soo hadlay
Wiilka uu dhalay Hogaamiyaha Liibiya Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, oo ay mucaaradku sheegeen inay nolol ku qabteen isla markaana maxkamada dambiyada dagaalka ee ICC ay sheegteen in lagu soo wargaliyey in la qabtey Saif ayaa isagoon ka qasneyn ayuu wuxuu wareysi ku siiyey Hotel ku yaal bartamaha magaalada Tripoli wariyeyaal ka socdey warbaahinta caalamiga ah.
Wakaalada wararka ee AFP ayuu siiyey wareysi uu ku sheegayo in sababta uu u soo muuqdey telefishinada inay tahay in uu sheego in mucaaradku ay jabeen oo kaarto dagaal oo loo degay ay ku dhaceen.
Sidoo kale wuxuu wareysi siiyey Telefishinka BBC-da wuxuu sheegay in kooxaha mucaaradka inay dhabarka ka jabeen oo ay ku dhaceen dabin loo dhigay, wuxuu sheegay in aanu u gacan galin mucaaradka isagoo sheegay in bad qabo.
Saif Al-Islam oo la waydiiyey halka uu ku dambeeyo Aabihisi hogaamiyaha Liibiya Col. Qadaafi wuxuu sheegay in uu ku sugan yahay magaalada caasimada ah ee Tripoli isla markaana aanu qabin wax dhibaato ah oo uu caafimaad qabo.
Xoogaga daacada u ah Col. Qadaafi ayaa jilibka u aasay sidii ay u difaaci lahaayeen deegaanka Bab al-Azizia oo ah halka uu degan yahay Col. Qadaafi.
“Halkan waxaan u joogaa si aan u buriyo beenta” ayuu yiri Saif al-Islam oo ay maxkamada dambiyada dagaalka ee caalamiga ah ay doon doonayso ka dib markii ay ku eedeysay dambiyo ka dhan ah aadamtinimada.
Wariyeyaashu waxay sheegeen in ay indhahooda ku arkeen Saif oo ku sugan guri la degan yahay waxaana ay sheegeen in sidoo kale gawaari loogu qaaday deegaanka uu degan yahay Col. Qadaafi.
Hadalkan wuxuu meesha ka saaraya sheegashadii mucaaradka ah ee aheyd inay qabteen Saif, iyadoo 24 saac ka hor madaxa maxkamada caalamiga ah ee dambiyada dagaalka Luis Moreno-Ocampo, the ICC prosecutor, uu sheegay Saif oo 39 sano jir lagu soo wargaliyey in la qabtey.
Curadka Qadaafi xaaladiisa.
Iyadoo xaley uu soo baxay war ku saabsan in Col. Qadaafi wiilkiisa cuaradka ah Muxamed uu sidoo kale u gacan galay xoogaga Mucaaradka isla markaana isagoo wareysi toos ah siinayey Tv-ga Al-Jazeera laga maqlay xabado ka dhacay halkii uu ku suganaa, isagoo Ashahaadanaya isla markaana sheegay in lagu hareeraysan yahay ayaa hada waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu baxsadey oo aan la qaban.
Mohammad oo ah gudoomiyaha shirkada Isgaarsiinta ee dawladu leedahay waxaa la sheegaa in aanu aad faraha ugula jirin arimaha dawlada si la mid ah sida walaalkiis Saif Al-Islam uu ugu lug leeyahay arimaha dawlada.
Wiilasha Qadaafi xagee ayay joogaan ?.
Muxamad oo ah wiilka curadka ah wuxuu xaley sheegay in lagu hareeraysan yahay waxaa hada soo baxaya warar ku aadan in uu baxsadey.
Saif al-Islam: Hada waxaa la xaqiijiyey in aan la qaban oo ay wareysi la yeesheen wariyeyaal caalami ah oo ka socda AFP & BBC.
Saadi: waxaa isaga la sheegayaa inay qabteen xoogaga mucaaradka.
Hannibal: Wax sidaasi u weyn oo door ah kuma laha arimaha siyaasada lama oga halka uu ku sugan yahay
Mutasim: waa sarkaal ka mid ah ciidamada wuxuuna la taliye u ayahay Aabihis dagaalka ayuu ku jiraa dhankiisa.
Saif al-Arab: Waxaa lagu diley duqeyn ay geysteen diyaaradaha NATO bishii April.
Khamis: Lama oga halka uu ku dambeeyo waxaase jirta warar sheegaya in la dilay.
Laakiin su’aasha ugu weyni waxay tahay Muammar Gaddafi isagu qudhiisu xagee ayuu ku dambeeya, hadalkii ugu dambeeyey ee laga maqlo wuxuu ahaa isagoo Axadii qabaa’ilka ugu baaqay inay difaacaan magaalada Tripoli.
“Sidee ku ogolaan kartaan in Liibiyo la gubo” ayaa ka mid ahaa hadaladii uu qabaa’ilka ku kicinayey Col. Qadaafi.
MUUQAALO DHEERAAD AH, WADOOYINKA TRIBOLI OO LAGU DAGAALAMAYO SIDA MQUDISHO